Home Wararka Dowlada Soomaaliya oo ka hortimid heshiiska Shiinaha iyo Somaliland
Dowlada Soomaaliya oo ka hortimid heshiiska Shiinaha iyo Somaliland
Dowlada Soomaaliya oo in mudo ah ka aamusnayd xiririka sii kordhaya ee u dhaxeeya Somaliland iyo Shiinaha aya ka hadasahay xirirkaas. Safiirka dowladda Soomaaliya u fadhiya dalka Shiinaha, Cawaale Cali Kilane, ayaa cambaareeyay wada-hadallada u dhaxeeya Taiwan iyo Somaliland.
Ambassador Cawaale ayaa sidoo kale caro ka muujyay tallaabada Taiwan ay ku doonayso in ay xafiis wakiil uga furato gudaha Somaliland. “Waanu cambaaraynaynaa qaabka ay Taiwan ula dhaqanto Somaliland, waxaanu mar walba ilaalin doonaa madax-banaanida qaranka Soomaaliya iyo midnimada dhuleed ee Soomaaliya haday tahay Taiwan ama cid kaleba. Habka Taiwan waa mid aad looga naxo marka laga eego macno ahaan sababtoo ah waxay abuuraysaa xasilooni darro ka dhacda Waqooyiga Soomaaliya, iyo xasillooni darro ka dhacda gobolka iyada oo la samaynaysa xidhiidh diblomaasiyadeed gobol gooni-goosad ah,” ayuu yiri safiirka Soomaaliya ee Shiinaha.
Safiirka Soomaaliya ee Shiinaha ayaa sheegay Taiwan oo Soomaaliya u aqoonsan tahay gobol kamid ah Shiinaha ay ka fogaato faro galinta ay ku hayso Soomaaliya arrimaheeda gudaha. Labadii sano ee ugu dambeysay, Taiwan iyo Somaliland ayaa sameystay xiriir ay ku tilmaameen mid u dhaxeeya labo dal oo madax bannaan. Labada dhinac ayaa sameystay wakiillo kala matala.
Previous articleMaxay ka wada hadleen saraakiisha Itoobiya & Axmed Madoobe?
Next articleMuqdisho oo ay ku soo kordhayaan iibinta iyo isticmaalka walxaha maanka dooriya
Dowladda Federaalka oo eedeyn adag u jeedisay Kenya